Ciyaaraha khadka tooska ah - Tirada malee
Bilow ciyaar cusub
Tirada malee - Xeerarka
Tirada malee waa ciyaar halkaas oo waa in aad isticmaasho macquulka ah si ay u maleynayaa in tiro qarsoodi ah 4-god soo xulay by computer ah bilowgii ciyaarta. Lambarka waxaa lagu sameeyaa lambar laga bilaabo 0 ilaa 9; lambar kasta wuxuu u muuqdaa hal mar ugu badnaan.
Tirada malee waxaa sarcaadka aad by via isku day badan. isku day ah wuxuu ka kooban yahay tiro la soo jeediyay, xulay aad by, iyo kombiyuutarada jawaab. computer waa in aad u sheegto, in uu reply, sida badan lambar ayaa aad sarcaadka on meel isku mid ah, iyo inta lambar ayaa aad sarcaadka on meel ka duwan.
Isticmaalka macluumaadka ka soo jawaab kombiyuutarada, waa in aad u maleynayaa in tirada la isticmaalayo guuro yar sida ugu macquulsan. Nasiib wacan!